भगवान II को वास्तविकता को मान्यता, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
भगवानलाई चिन्न र अनुभव गर्दै - त्यो जीवनको बारेमा हो! भगवान्‌ले उहाँसित सम्बन्ध राख्न हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। सार, अनन्त जीवनको मूल, परमेश्वर र येशू ख्रीष्टलाई पठाउनुहुन्छ जसलाई उहाँ पठाउनुभयो। भगवानलाई चिन्नु भनेको कुनै कार्यक्रम वा विधि मार्फत होइन, तर एक व्यक्तिसँगको सम्बन्धको माध्यमबाट हुन्छ। जब सम्बन्ध विकास हुँदै जान्छ, हामी बुझ्छौं र परमेश्वरको वास्तविकता अनुभव गर्दछौं।
भगवान कसरी बोल्नुहुन्छ?
परमेश्वर पवित्र आत्मा मार्फत बाइबल, प्रार्थना, परिस्थिति र चर्चमार्फत बोल्नुहुन्छ आफूलाई, आफ्ना उद्देश्यहरू र उहाँका तरिकाहरू प्रकट गर्न। «किनकि परमेश्वरको वचन कुनै दुईधारे तरवार भन्दा जीवित र बलियो छ र तीक्ष्ण छ, र यो आत्मा र आत्मा, मज्जा र खुट्टा अलग नगरेसम्म प्रवेश गर्दछ, र हृदयको विचार र इन्द्रियहरूको न्यायकर्ता हो। (हिब्रू १०: २))
परमेश्वर हामीसँग प्रार्थना मार्फत मात्र होइन तर उहाँको वचन मार्फत बोल्नुहुन्छ। हामी उहाँको वचन बुझ्न सक्दैनौं जबसम्म पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउँदैन। जब हामी परमेश्वरको वचनमा आउँछौं, लेखक आफै हामीलाई सिकाउन उपस्थित हुन्छन्। सत्य कहिल्यै पत्ता लाग्दैन। सत्य प्रकट भएको छ। जब सत्य हामीलाई प्रकट हुन्छ, हामी भगवान संग एक भेट गर्न नेतृत्व गर्दैन - कि छ भगवान संग एक भेट! जब पवित्र आत्माले परमेश्वरको वचनबाट आत्मिक सत्य प्रकट गर्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो जीवनमा व्यक्तिगत रूपमा प्रवेश गर्नुहुन्छ (१ कोरिन्थी १२: -1-।)
सम्पूर्ण धर्मशास्त्रमा हामी देख्छौं कि परमेश्वरले आफ्ना जनहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा बोल्नुभयो। जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, यो प्रायः प्रत्येक व्यक्तिलाई एक अनौंठो तरीकाले हुन्छ। जब उहाँ हाम्रो जीवनमा उद्देश्य राख्नुहुन्छ उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। यदि ऊ हामीलाई आफ्नो काममा सामेल गर्न चाहन्छ भने, उसले आफूलाई प्रकट गर्छ ताकि हामी विश्वासमा जवाफ दिन सक्नेछौं।
हामीमाथि परमेश्वरको इच्छा छ
उहाँसँग काममा जानको लागि परमेश्वरको निमन्त्रणाले जहिले पनि विश्वासको स crisis्कट निम्त्याउँछ जुन विश्वास र कार्यको आवश्यक पर्दछ। "तर येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: मेरा पिताले आजसम्म काम गर्नुहुन्छ, र म पनि काम गर्दैछु ... तब येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो:" साँच्‍चै, म तिमीलाई भन्दछु: छोरा आफैले केही गर्न सक्दैन, तर केवल के उसले बुबालाई गरिरहेको देख्दछ; किनभने यसले के गर्छ, छोराले पनि गर्छ। किनभने बुबाले छोरालाई माया गर्दछ र उसले गरेको सबै कुरा देखाउँदछ, र उसलाई अझै ठूला कामहरू देखाउँदछ, ताकि तपाईं चकित हुनुहुनेछ (यूहन्ना :5,17:१:19, १ -20 -२०)। "
यद्यपि, हामीलाई परमेश्वरसँग काम गर्न निमन्त्रणा दिंदा सधैं विश्वासको स to्कट हुन्छ, जसमा विश्वास र कार्य चाहिन्छ। जब परमेश्वर हामीलाई उहाँको काममा सामेल हुन आमन्त्रित गर्नुहुन्छ, तब उहाँसँग एउटा कार्य छ जुन ईश्वरीय ढाँचामा छ जुन हामी आफैले गर्न सक्दैनौं। यो भन्नुपर्दा, विश्वासको स crisis्कट बिन्दु हो जब हामीले परमेश्‍वरले हामीलाई आज्ञा गर्नुभए अनुरुप हामीले अनुसरण गर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ।
विश्वासको स a्कट एउटा यस्तो मोड हो जहाँ तपाईंले निर्णय गर्नुपर्दछ। तपाईंले भगवानको बारेमा के विश्वास गर्नुहुन्छ निर्णय गर्नु पर्छ। यस मोडमा तपाईले कसरी प्रतिक्रिया देखाउनुहुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ कि तपाई ईश्वरीय स्वरुपमा ईश्वरको साथ सम्मिलित भइरहनु भएको छ कि केवल उहाँ मात्र गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाई आफैले आफ्नै मार्गमा जारी राख्नुभयो वा भगवानले तपाईको जीवनको लागि योजना गरेको कुरालाई याद गर्नुहुनेछ। यो एक पटकको अनुभव हैन - यो दैनिक अनुभव हो। तपाईको जीवनलाई तपाईले कसरी जीउनु हुन्छ भन्ने कुरा तपाईको ईश्वरको बारेमा के विश्वासको प्रमाण हो।
हामी इसाईले गर्नुपर्ने एउटा सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको आफूलाई इन्कार गर्नु, परमेश्वरको इच्छालाई स्वीकार्नु र यसलाई अनुसरण गर्नु हो। हाम्रो जीवन ईश्वर केन्द्रित हुनुपर्दछ, म केन्द्रित होइन। यदि येशू हाम्रो जीवनको प्रभु बन्नुभयो भने, उहाँ सबै परिस्थितिमा प्रभु हुनु पर्ने अधिकार छ। हामीसँग परमेश्वरको काममा सामेल हुन हामीले हाम्रो जीवनमा ठूलो छाँटकाँट गर्नु आवश्यक छ।
आज्ञाकारिताको लागि परमेश्वरमा पूर्ण निर्भरता चाहिन्छ
हामी उहाँको आज्ञापालन गरेर र भगवानले उहाँ मार्फत काम गर्दैहुँदा हामी अनुभव गर्दछौं। याद राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण बुँदा यो हो कि तपाईं आफ्नो जीवनलाई सधैजसो अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न, तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ बस्नुहोस् र एकै समयमा परमेश्वरसँग जानुहुन्न। समायोजन जहिले पनि आवश्यक हुन्छ र त्यसपछि आज्ञाकारिता पछ्याउँदछ। आज्ञाकारिता तपाई मार्फत काम गर्न परमेश्वरमा पूर्ण निर्भरता चाहिन्छ। जब हामी हाम्रो जीवनको सबै कुरालाई ख्रीष्टको प्रभुत्वमा अधीनमा राख्न तयार हुन्छौं, तब हामीले पत्ता लगाउँदछौं कि हामीले गरेको समायोजनहरू परमेश्वर अनुभव गर्ने इनामको लागि लायकका छन्। यदि तपाईंले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन ख्रीष्टको शासनको लागि त्याग्नु भएको छैन भने, अब आफूलाई इन्कार गर्ने, आफ्नो क्रसलाई लिने र उहाँलाई पछ्याउने निर्णय गर्ने समय अहिल्यै हो।
You यदि तपाईं मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने, तपाईं मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नुहुनेछ। र म बुबालाई सोध्न चाहन्छु र उहाँले तपाईंलाई अर्को सान्त्वना दिनुहुनेछ कि उहाँ तपाईंसँग सँधै रहनुहुनेछ: सत्यको आत्मा जुन संसारले दिन सक्दैन, किनकि यसले देख्दैन र नचिन्छ। तपाईं उसलाई चिन्नुहुन्छ, किनकि उहाँ तिमीहरूसँग रहनुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। म तिमीलाई टुहुरा छोड्ने छैन। म तपाईं कहाँ आउँछु। यो अझै केही बेर पछि, तब संसारले मलाई देख्ने छैन। तर तिमीले मलाई देख्नु पर्छ किनभने म बाँच्दछु र तपाईं बाँच्नु पर्छ। त्यस दिन तिमीले थाहा पाउनेछौ कि म पितामा छु र तिमी ममा छौ र म तिमीमा छु। जसले त्यो मलाई प्रेम गर्दछ जसले छ, मेरो आज्ञा छ र तिनीहरूलाई राख्छ। तर जसले मलाई प्रेम गर्दछ उसले मेरा बुबालाई प्रेम गर्दछ, र म उसलाई प्रेम गर्छु र आफैलाई उनीसामु प्रकट गर्छु " (यूहन्ना .14,15..21-)
आज्ञाकारिता भनेको परमेश्वरप्रतिको हाम्रो प्रेमको बाह्य रूपमा देखिने अभिव्यक्ति हो। धेरै हिसाबले, आज्ञाकारिता भनेको हाम्रो सच्चाईको क्षण हो। हामी के गर्छौं
हामी वास्तवमा उहाँबारे के विश्वास गर्छौं भन्ने कुरा प्रकट गर्नुहोस्
हामी हामीभित्र उसको काम अनुभव गर्छौं कि गर्दैनौं निर्धारण गर्नुहोस्
यदि हामीले उहाँलाई नजिकबाट चिन्न सक्यौं भने निश्चित गर्नुहोस्
आज्ञाकारिता र प्रेमको लागि ठूलो इनाम यो हो कि परमेश्वर आफैले हामीलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। हाम्रो जीवनमा ईश्वरलाई अनुभव गर्नु नै यो कुञ्जी हो। जब हामी जान्दछौं कि परमेश्वर निरन्तर हाम्रो वरिपरि काम गरिरहनु भएको छ, उहाँ हामीसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, कि उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ र हामीलाई उहाँसँग काममा सामेल हुन आमन्त्रित गर्नुहुन्छ, र हामी विश्वास अभ्यास गर्न र कार्य गर्न तयार छौं। उहाँको निर्देशनहरू पालन गर्ने क्रममा छाँटकाँट गरेर, तब हामी अनुभवद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न सक्नेछौं, जब उहाँ हामी मार्फत आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ।